Ma Hanaqaadi Doonaa Iskaashiga Ganacsi Ee Israa’iil Iyo Shiinaha? – somalilandtoday.com
Sidaas darteed marka la eego khilaafka ganacsi ee ka dhex aloosan Maraykanka iyo Shiinaha, Israa’iil waxaa si xooggan looga filan karaa garabka Maraykanka.
Balse wali waxaa dad badan uu mugdi iyo madmadow badani uga jiraa in maalgashiga Shiinaha ee Israa’iil uu noqon doono mid hanaqaada, ayadoo dhanka kale ay sii kordhayso tirada sharikadaha Israaiil ee ku biiraya Suuqyada ganacsiga ee Shiinaha.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionAmiirka Williams-ka UK oo Israaiil booqanaya
Haddaba markii madaxweyne Trump uu canshuuro dheeri ah dusha ka saaray badeecooyinka Shiinaha hadal qallafsanna uu ku weeraray, dhanka kale Raisul wasaaraha ISraa’iil Benjamin Netanyahu wuxuu si rayrayn leh ugu dhiirri galinayey sharikadaha dalkiisa in ay oggolaadaan maalgashiga Shiinaha.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionSharikadaha Shiinaha
20-kii sano ee lasoo dhaafay dhaqaalaha Israa’iil wuu saldhigtay waxuuna noqday hormuudka hormarka dhanka Tiknoolojiyadda.
Dadka wax falanqeeya ayaa qaba in sharikadaha Shiinuhu ay doonayaan in ay gacanta ku dhigaan tiknoolojiyaddaas, halka sharikadaha Israa’iil ay doonayaan in ay si wanaagsan galaangal ugu yeeshaan Suuqyada Shiinaha ee ballaaran.
Hagai Tal, oo ah madaxa fulinta ee sharikadda Taptica, oo ah sharikad wax xayaysiisa waxa uu qabaa “in Sharikadaha Shiinuhu ay ka faaidayaan Suuqyaa Tiknoolojiga casriga ah ee Israaiil, si ay kor ugu qaadaan dhaqaalahooda, Suuqyadaas oo ah kuwo magac ku leh dhanka hal abuurka”
“Shiinuhu wuxuu dadaal ugu jiraa sidii uu Suuqyada Israa’iil wax uga baran lahaa inta karaan kiis ah iyo sidii uu dhaqaalihiisa uga dhigi lahaa mid hal abuur ku dhisan.
“[Ayadoo ay sidaas tahay], sharikadaha Israaiil waxay sidoo kale dhanka Bariga ka arkaan in ay kajiraan fursado wax ku ool ah, marka la isu geeyo labadaas arrimood ayaa ah waxa dhalinaya in uu yimaado iskaashi ganacsi oo guulaysta”
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionIsraaiil oo 20-kii sano ee u dambeeyay dhaqaale badan ka samaysay Tiknoolojiga casriga ah
Sanadihii u dambeeyey Sharikadaha israa’iil waxay si toos ah usoo iibsanayeen Sharikado Shiinaha laga leeyahay, ama waxayba saamiyadooda qaar ka iibinayeen kuwa shiinaha, waxaana kamid ah Sharikadaha lagu magacaabo medical lasers operation Alma Lasers, iyo medical devices group Lumenis.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionRaisul Wasaarihii hore ee Israel Ehud Olmert
Si kasta ha ahaate, ma’ahan sharikadaha Shiinaha oo kaliya cidda ka faa’idi doonta xidhiidh ganacsi oo dhow oo ay yeeshaan labada dal.
Sharikadaha kale ee Israa’iil laga leeyahay ee hormarka ka sameeyey Suuqyada Shiinaha waxaa kamid ah sharikadda suuqgaynta Moobilada qaabilsan ee AppsFlyer.